Oduu Gaddaa: Seenaa Jaal Faarsee Taaddalaa | QEERROO
Oduu Gaddaa: Seenaa Jaal Faarsee Taaddalaa
Posted on June 26, 2011 by Qeerroo
(Oduu Qeerroo, Finfinnee, Wxabajjii 26, 2011) Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi sochii Qeerroo keessatti hirmaannaa boonsaa gumaachaa kan turte Jaal Faarsee Taaddalaa Dagafuu balaa akka tasaa irra gaheen addunyaa kana irraa boqotte.
J/ Faarsee Taaddalaa
Jaal Faarseen abbaashee obbo Taaddalaa Dagafuu fi harmeeshee aadde Asteer irraa bara saddettamootaa keessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa ona Baakkoo magaalaa Shobokaatti dhalatte.
Jaal Faarseen umriin ishee barnootaaf akka gaheen Bakkoo fi Finfinneetti itti fufuun kolleejjii irraa barnoota narsiin eebbifamteetti.
Jaal Faarseen sabboontuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee olaanaa gumaachaa turte yoo taatu, amalaanis jaallatamtuu fi dhaloota sabaaf of kennanii gahee olaanaa gumaachaa jiran keessatti kan ramadamtu, biqiltuu sabaa turte.
Akka galmee seenaa ishii irraa hubatamutti, miidhaa saba Oromoorra gahu hubachuuf jaal Faarseetti yeroo hin fudhanne ture.
Akka kanaan umriishee ijoollummaarraa kaastee sabboonummaan kan keessasheetti biqilee fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramtee dirqamashee bahuu eegalte.
Keessumaa sochii waldaan Maccaa fi Tuulamaa adeemsisaa ture keessatti akka dargaggummaa isheetti dirqama jajjabaa raawwachaa akka turte namootni qaamaan ishee beekan ragaa bahu.
Yeroo hamaa keessattis, fakkeenyaaf, jijjiiramuu magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinneerraa gara Adaamaatti godhame irratti hiriira mormii Waldaan Maccaa fi Tuulamaa addabaaba’ii masqalaa Finfinneetti qopheessee, humna poolisa federaalaa wayyaaneen akka faca’u ta’e keessatti kutannoon poolisa wayyaanee meeshaa haga funyaaniitti hidhate waliin falmaa guddaa warra gaggeessaa oolan keessaa nama jalqabaa akka turte gaafa sana warri qaamaan bira turan afaan guutanii dubbatu.
Jaal Faarseen sabboontota Oromoo oromummaa Isaaniin yakkamanii manneen hidhaa wayyaaneetti guuraman deddeebitee gaafachuun, haga humnasheetti waan qabduun gargaaruun, haamileesaanii ijaaruun, ergamuunii fi k.k.f gochuun amalashee akka ture hidhamtooti marti ragaan bahan.
Jaal Faarseen sababa sabboonummaasheen Finfinneerraa kaasee godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti marartuu sabaa ta’uun Oromoota hedduu biratti kan beekamtu yoo taatu, amala sabboonummaa kanaanis jaalala guddaa akka qabdu kanneen ishii beekan ragaa banan.
Sabboonummaa Jaal Faarsee kanatti kan aaran humnooti tikaa wayyaane bara 2007keessa qabanii mana hidhaa maa’ikalaawwii keessatti akka dararaa turan kan beekamu yoo ta’u, yeroo sanatti reebbichi humnaan olii humnoota tikaa wayyaaneen irra gahullee icciitii ishii eeggachuun ragaan tokko otoo irratti hin argamiin manneen hidhaa maa’ikelaawwii fi Qaallittii keessatti erga waggaa tokkoo oliif hidhamtee booda mana murtii ol aanaa biyyattiin bilisaan akka lakkifamte seenaa galmee ishii irraa hubachuun danda’amee jira.
Akka mana hidhaa wayyaaneerraa lakkifamteenis jiile, nuffe otoo hin jedhiin ammas dirqama lammummaa dachaan guddisuun dargaggoota akka ishii waliin taatee qabsoo Oromoo keessaqtti gahee ishii bahuu itti fufte. Keessumattuu, sochii QEERROO Oromoon adeemaa jiru keessatti haga gaafa lubbuunshee dabruutti dirqama laatamuuf kamuu fudhattee socho’aa akka turte qunnamtiin Qeerroo mirkaneesseera.
Jaal Faarseen egaa dadhabe, nuffe , jiile otoo hin jedhiin umriishee ijoollummaarraa kaasee kunoo haga umriishee dargaggummaatti otoo qabsoo Oromoo waliin buutee baatuu waxabajjii 17, 2011 balaa konkolaataa ishii mudateen hiriyyoottan ishii konkolaataa san keessa turan torba waliin lubbuunshee darbe.
Sana booda reeffi jaal Faarsee fi namoota kaaniis bakka dhalootashee kan taate Shobokaatti bakka Sabboontotni Oromoo, hiriyyootnii fi firoottanshee hedduun argamanitti gaafa waxabajjii 18,2011 sirnaan raawwatameera.
Dameen Qunnamtii Qeerroos firroottan ishiif jajjabina, jaallan hafaniif immoo kutannoo akka ta’u dhaamsa dabarsaa, haallen akkasii kunis rifachiisaa ta’an illee, yeroo akkanaatti hundeen jabina irbuu keenya eeggannee qabsoo bilisummaa eegalame galmaan gahuutti cichuu ta’uu hubachiisa.
Qabsaa’aan ni kufa; qabsoon itti fufa!
2 thoughts on “Oduu Gaddaa: Seenaa Jaal Faarsee Taaddalaa”
GFB on June 27, 2011 at 12:55 am said:
Du’a dubree Faarsee Taaddalaa yommuun dhagahe heddun rifadhe. Faarseen fakkeenya sabboontotaa fi qabsaa’ota Oromoo, keessumaa dargaggootaa fi shamarran Oromoo turte. Seenaa miidhagaa himamee hindhumne qabdi. Faarseen sochii WMT keessatti gaheen bahaa turte, Koree aadaa fi seenaa WMT keessatti gaheen ishiin bahaa turte, hawwisoo sirboota, baacoo fi walaloo, akkasumas diraamaa warraaqsaa fi aadaa oromoo waltajjii irratti dhiyeessuun yeroo gabaabaa keessatti laphee Ummata Oromoo seenee aarii kanaan mootummaan wayyaanee kan cufe baandii OMRSAN jedhamu bu’ureessuu fi keessattis hirmaachuun gahee olaanan ishiin qabdu, poolisoota sirna wayyaanee hin baqannu jettee waldhaansoo ittiin qabuun ifatti gootummaa ishii jaala mul’iste sabboontuu jaalatamtuu turte. Dhugumatti duti Faarsee nama rifaasisu illee jaallan ishii hafne fakkeenyummaa ishii fudhannee dirqama ulfaataa ishiin baachaa turtee fi kaayyoo ishiin itti dhama’aa, reebamaa (sababa reebicha wayyaaneen amma fincaan fincaa’uu dadhabuu geessee akka turte nan yaadadha), hidhamaa, turte galmaan gahuun gumaa ishii haa baafnu.
Carraa kanaan maatii fi hiryootta ishiif jajjabina, jaallan ishiif ammoo kutannoo hawwaa, Ekeraan ishii booka haa dhugudun jedha.
Qabsaa’aan ni kufa, Qabsoon itti fufa!!!!
Qabsoon itti fufa, gabroomfataan ni kufa!!!
Burqaa Dhaabaa on June 28, 2011 at 5:15 am said:
Du’a Faarsee eennaan dhagayu heeduun rifadhe, nin gadee ,keesa kooti natti dhagayame amanu hin dandeenye . Faarseen nama tokko miti .Faarseen nama waliin kuftee ,nama waliin rakkate,lamii ishii waliin hiraaramte fi dhamatee jiraachu gamadu dha, waan dhimma oromoo keesaa yoo dhabamte irriba hin qabdu . Faarseen nama haala yeroo fi adunaan hin booji’amne dha.Faarseen nama dhugaa fi eenyumaa ishiitiif aarsaa kanfaluuf nama of qopheesite jiraachaa turte dha Eegaa waahee faarsee hime bakka itti dhaabu hin qabu.Duti Jaal Faarsee guddoo na gaddisise.Rabbi biyyoo itti haa salphisu.
Firootani ishiitii fi hiriyootan ishii ammo rabbi haa jajjabesun jedha.
Qabsaahaan kufullee qabsoon itti fufa!